तपाईलाई थाहा छ, ट्रम्पका यी सात रोचक कुरा – Rajdhani Daily
तपाईलाई थाहा छ, ट्रम्पका यी सात रोचक कुरा
वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ‘अतिसम्म’ पुगेर आफूलाई मनमा लागेका कुराहरुको खोजी गर्ने मानिसको कोटीमा पर्दछन् । उनी अरूको सल्लाह लिए पनि आफैंले व्यवहारमा देख्न र गर्न चाहन्छन् ।
नदेख्दासम्म र नगर्दासम्म कुनै पनि काम उनका लागि जिज्ञासाको विषय बनिरहन्छ । उनले भेट्न चाहेको मानिस वा देख्न चाहेको वस्तुलाई पहिलोपटक भेटे वा देखे भने निकै घुरेर आँखाको लेन्स ठूलो, मध्यम र सानो पारेर अनुहार बिगारीबिगारी हेर्छन् । तर उनको यो हेराइ भने ‘क्विक ग्ल्यान्स’जस्तो हुन्छ । नेपालीमा भन्ने गरेझैं ‘चौकोण’बाट नियाल्छन् उनले ।
अरू त अरू मर्यादा क्रमको ख्यालै नराखी आफूभन्दा कनिष्ट भए पनि अगाडि लगाएर पछिल्तिरबाट नियाली छोड्छन् । यसरी अघिल्तिरबाट र पछिल्तिरबाट घुरेर पिछा गर्ने यो प्रवृत्तिलाई नेपाली समाजमा ‘बाघे प्रवृत्ति’ भनिन्छ । यस्तो बाघे प्रवृत्तिका ट्रम्पका अन्य रोचक कुराहरु पनि छन् ।
२. उनी निकै रोमान्टिक व्यक्ति हुन् । बूढो हुँदा पनि त यतिका धेरै रोमान्टिक छन् । उनी र सुन्दरी अन्ना निकोल स्मिथबारेका निकै रोमान्टिक घटनाहरु उनका साथीहरूका मुखारविन्दमा अहिले पनि ताजै छन् । उनीमाथि यौन हिंसाको आरोप पनि छ । उनले भन्ने गरेका पनि छन्– पुरुष होस् वा महिला एउटा सेलिब्रेटीका पछि आकर्षणका कारण धेरै मानिस झुम्मिने गर्दछन् ।
३. उनले रक्सी खान त परै जाओस् छुदैनन् पनि । चुरोटबाट टाढै रहन्छन् । त्यसैले उनका बारेमा साथीहरुले मजाक पनि गर्ने गर्दछन् कि यदि ट्रम्पले रक्सी खाने भए उनी यति रुखो र झोडी स्वभावको होइन, निकै मिजासिला हुने थिए । तर उनका दाजुको भने रक्सीका कारण मृत्यु भएको थियो ।
४. उनी हालसम्मका निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुमध्ये सबैभन्दा बढी उमेरका र सबैभन्दा धनी हुन् । तर उनको धन कमाउने र अमेरिकालाई धनी बनाउने सपनाले नै यहाँ पु¥याएको उनका साथीहरु बताउँछन् । उनी भन्ने गर्थे म राष्ट्रपति भएमा अमेरिकालाई सबैभन्दा धनी बनाइदिन्छु । उनले बेलाबेलामा ध्वाँस पनि देखाउने गर्छन्, ‘सबैभन्दा बढी पैसा अमेरिकामा छ’ भनेर ।
५.उनी किशोर हुँदा उनको परिवारले सैनिक स्कुलमा अध्ययनका लागि पठाएको थियो । यो उनीभित्र रहेको हाउडे र झगडालुपन सुधारका लागि थियो । उनी सैन्य स्कुलमा रहँदा उनको झगडालु स्वभावमा निकै कमी आएको थियो । तर उनी सधैं टिमको कमान्डर नै बन्न चाहने अभिव्यक्ति राखिरहन्थे । कमान्डर हुन नपाउँदा अनुशासन पनि तोड्ने गर्थे ।
६. ट्रम्पको चाहिनेभन्दा बढी ‘सो’ गर्ने बानी बाल्यकालदेखिकै हो । सानैदेखि उनी सो गर्न रुचाउँथे । उनका साथीहरु ट्रम्पको बारेमा पहिलो आलोचना नै ‘सो नगर्नु’ भन्ने हुन्थ्यो । तर उनी हरेक कुरा सो गर्न कहिल्यै पनि भुल्दैनथे । उनी अहिले पनि प्रचारमुखी र आलोचक बढी नै रहने गरेका छन् । कहिलेकाहीं त उनी अहिले पनि आफ्नो मर्यादा बिर्सेर तीतो आलोचना र निम्नस्तरको गाली गलोजमा उत्रन्छन् ।
यी रोचक कुराहरु उनका आनीबानीसँग जोडिएर आएकाले अहिले पनि यी कुराहरु उनका आलोचनाका विषय बनिरहेका छन् ।
एक जमाना थियो । शासन पनि देशमा ठूलाठालुहरुले गर्दथे । भारतमा पनि कम्पनी सरकारको वरिपरि भारतीय उच्च घरानियाँहरुले तल्ला तहका शासन गर्दथे । सरकार भनेको जनताको होइन, जनतामाथि शासन गर्ने हाउँगुजी संयन्त्र...